Xawaaladaha: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, ... oo dhan oo ku saabsan cryptos | Wararka Gadget
El adduunka cryptocurrencies way sii xoogaysanaysaa maalin kasta. Dhawr sano ka hor tirada maalgashadayaasha ee cryptocurrencies runti way tiro yaraayeen laakiin maalin kasta dad aad iyo aad u tiro badan ayaa galaya isbadalkan kacaan ee ku lug leh soo galitaanka cryptocurrencies ee suuqyada maaliyadeed.
Ma ogtahay waxa Bitcoin tahay? Ma jeclaan lahayd iibso Bitcoins? Ma ogtahay waa maxay ethereum Ma ogtahay awooda ay madalkani ku siin karto? Waa maxay fargeeto Seeraar? Maxay ku kala duwan yihiin Bitcoin iyo Bitcoin Cash? Waa maxay lacagta Litecoin sidee ayey uga duwan tahay Bitcoin? Waa maxay ICO sidee baanse ku maalgashan karaa? Maxay yihiin cryptocurrencies oo kordhin doona qiimahooda ugu badan bilaha ama sanadaha soo socda?
Dhammaan su'aalahan waa kuwa dad badani is weydiiyaan maalin kasta, kana soo qaadda Actualidad Gadget waxaan kaa caawin doonnaa inaad fahamto qaybtaan cusub sida ugu macquulsan.
Qodobbada muhiimka ah ee ku saabsan Cryptocurrencies
Haddii aad ka bilaabaneyso adduunka cryptocurrencies markaa qodobadan wax weyn ayey kuu tarayaan.
Buuxi Bitcoin: waa maxay Bitcoin, sidee u shaqeysaa iyo sida loo iibsado bitcoins
Iibso Ethereum: waa maxay Ethereum iyo sida loo iibsado Ethers.
Iibso Litecoin: waa maxay Litecoin iyo sida loo iibsado
Hashflare, madal macdanta macdanta cryptocurrency.
Wararka Cryptocurrency iyo Casharrada
Soo hel wararkii ugu dambeeyay ee cryptocurrency iyo casharro inaad awood u yeelato inaad maal gashato oo aad ka shaqeyso qaybtaan iyadoo dammaanad buuxda leh.
Daqiiqadaha hoos u dhaca Bitcoin, waqtiga maalgashiga?
Ka dib dhammaan kor u kaca iyo hoos u dhaca ku weheliyay nolosha cryptocurrencies taariikhdeeda, ...
Waa maxay cryptocurrency si ay u iibsadaan si ay u bilaabaan abuurista our faylalka tacliimeed ee hantida crypto
by War gadget samee 3 sano .
In kasta oo aanad had iyo jeer u baahnayn inaad u noolaato sida qudhaanjada maahmaahda ku jirta sheekada, ma aha caqli gal inaad u dhaqanto sida cicada oo keliya, iyo ...
Doolar fiican ama cryptocurrencies?
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' ayaa muddo dheer tan iyo markii ay ka tagtay xiisaha xiisaha leh si ay u noqoto, midigteeda, a ...
Suuqa loo yaqaan 'Cryptocurrency', oo ay hogaamiso Bitcoin, ma ahan sanadki ugu fiicnaa. Qiimaheeda ayaa hoos u dhacay ...
Facebook waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto cryptocurrency u gaar ah
Xawaaladda cryptocurrency wali ma dhamaan. 2018 ma ahan mid gebi ahaanba wanaagsan suuqan, ...
Bilahaan waxaan arkeynaa inta shirkadood ee ku sharaddeeynaya Blockchain, oo dad badani u arkaan tikniyoolajiyadda mustaqbalka. Sidoo kale…
Waqti ka hor Telegram wuxuu ku dhawaaqay gelitaankiisa suuqa cryptocurrency ee Gram. Si loo bilaabo mashruucan, ...
Dib-u-dhac weyn oo weyn oo ku yimid WikiLeaks. Tan iyo markii koontada ay ku leeyihiin Coibase la xanibay. Go'aan ...
Xawaaraha cryptocurrency ayaa umuuqda in uusan wali dhamaan. Maaddaama isticmaaleyaal badani ay sii wadaan macdanta Bitcoin ...
Intii lagu guda jiray 2017, waxaan awoodnay inaan aragno sida lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', sida Bitcoin, Ether iyo kuwa kale, ay si aad ah u toogteen ...
Koox injineero ah oo ka shaqeeya Xarunta Nuclearka ee Federaalka ee Ruushka, oo ah xarun qarsoodi ah oo nukliyeer ah, ayaa ...